Buuhoodle: 100 kun oo ari oo la tallaalayo
Buuhoodle: 100 kun oo ari oo la tallaalayo
Tallaalka ari dhan boqol kun oo neef ayaa ka bilowday degmada Buuhoodle iyo shan deegaan oo ku dhow oo ka wada tirsan gobolka Togdheer. Ariga deegaankaas ayaa laga tallaalayaa cudurro ay ka mid yihiin jadeecada iyo furuqa, iyadoo xoolaha qaba cudurka dulanka dawooyin la siinayo.
Wasaaradda Caafimaadka ee Puntland iyo hey’adda Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay ayaa si wadajir ah u fulinaya tallaalka oo socon doono muddo afartan maalin ah. Howl-wadeennada tallaalka oo kala jooga tuulooyinka Waqooyi iyo galbeed kaga beegan degmada Buuhoodle ee kala ah Kalshaale, Dhilaalo, Sool-joogto, Hagoogane, Baleef iyo tuulada Xamar-lagu-xidh ayaa ilaa hadda tallaalay Ari ka badan 40 kun oo neef toddobaad iyo bar gudahood.
Waa markii ugu horreysay oo xoolaha deegaankaas ay tallaal helaan wixii ka dambeeyay dowlad burburkii dhowr iyo labaatanka sano kadib, sida uu sheegay dhakhtar Cabdirashiid Raabbi oo madax u ah kooxda tallaalka tuulada Dhilaalo. Dhakhtarku wuxuu intaa ku daray in dadka xoolo-dhaqatada ah ay sidoo kale uga digayaan isticmaalka hilibka neefka la tallaalay muddo kow iyo laabatan maalmood ah gudahood, iyadoo caanaha neefka la cabi karo toddobaad uun kadib marka la tallaalo.
Si kastaba, cudurrada jadeecada iyo furuqa ayaa kusoo noq-noqday deegaankaas oo adeegyada caafimaadka ee dadka iyo duunyadaba ay aad u hooseeyaan. Aadan Ismaaciil oo ka mid ah xoolo-dhaqatada tuulada Xamar-lagu-xidh oo 40km dhanka bari ka beegan Buuhoodle oo la soo xiriiray Raadiyoow Ergo bishii hore ayaa sheegay in badi ariga deegaanka ay la il daran yihiin labadaas cudur oo ay daawo iyo tallaal u heli karin.
Laakiin xoolo-dhaqatadu waxay ku faraxsan yihiin inay ugu dambeyn tallaal u helayaan cudurradaas, sida uu sheegay Faarax Jaamac oo ku nool tuulada Dhilaalo ee degmada Buuhoodle. “Muddo dheer baan xoolo-dhaqde ahay; markii ugu horreysay arigeyda oo dhan baa lay tallaalay,” ayuu yiri Faarax oo ku rajo weyn in tallaalku uu cirib-tiro xanuunnada xooluhu ay u dhiman jireen.
Khadar Cawl Ismaaciil/FO/MR
Awdal iyo Bay